Tababar ku Saabsan Barashada Xuquuqda Dadweynaha oo ka Furmay Jijiga – Rasaasa News
Mar 19, 2012 ethiopia, ONLF, Somali, Tababar ku Saabsan Barashada Xuquuqda Dadweynaha oo ka Furmay Jijiga
100 ka tirsan ciidanka degaanka Somalida Ethiopia, oo uu tababar socon doona saddex cisho uga furmay Hotel Bade, magaalada Jijiga ee xarunta degaanka Somalida.
Tababarkan oo socon doona mudo sadex cisho ah, ayaa lagu baran doonaa casharo la xidhiidha barashada sharciga iyo xuquuqda dadka.
Tababarkan waxaa qaadan doona ciidamo isugu jira ciidanka Booliska, ciidanka Asluubta iyo ciidanka Canshuuraha, oo dhamaantood qaadan doona casharo isku mid ah.
Warkan oo aan ka soo xiganay boga cakaara, oo ku hadla afka dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaan sheegin cida bixinaysa tababarka barashada sharciga iyo xuquuqda dadka.
Sida lagu qoray bogga cakaara, waxaa kale oo ciidankan la barayaa guud ahaan dastuurka dalka Ethiopia iyo sidii ay boolisku ula dhaqmi lahaayeen kolka ay qabtaan ruux loo haysto dambi iyo waliba sidii ay ula dhaqmi lahaayeen dadka xukuman ee xabsiyada ku jira.
Dadweynaha ku nool degaanka Somalida Ethiopia, ayaan gabi ahaanba wax aqoon ah u lahayn sharciga iyo xuquuda ay leeyihiin midna, waxayna ka cabsadaan madaxda iyo booliska dawlada degaanka, intii ay ka cabsan lahaayeen sharciga.
Haatan waxaa degaanka Somalida ka jira sharciga ciqaaba dambiyada [criminal law] oo kaliya, laakiin waxaa maqan sharciga dadweynaha [civil law]. Gardara kasta oo gaadha shakhsiga ku nool degaanka Somalida Ethiopia, af iyo adin midkood, ma jiro sharci dadweyne oo lagu dacwoon karo.
Inta uu maqan yahay sharciga dadweynaha [civil law] ee ilaalinta xuquuqda aas aasiga ah, tababar kasta oo la siiyo ciidanka booliska iyo cidii kaleba waa bilaash.
Jwxo-shiil: Shacab Somaliland Waxaa Laayey Booliska Degaanka